क्या AIVD नेदरल्याण्ड्स मा पूर्वी जर्मन (डीडीआर) स्टेसी को रणनीति को परिष्कृत गर्यो? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर [AIVD अलार्म], समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 सेप्टेम्बर 2017 मा	• 19 टिप्पणिहरु
स्टेसी शीत युद्धको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वी जर्मन इन्टरनेट इन्टरनेसनल र सुरक्षा सेवा थियो, र संसारमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा देखा पर्यो। स्टेसी एक गुप्त सेवा थियो र तीव्र रूपमा सोभियत युनियनका केजीजीले प्रभाव पारेको थियो। 1990 मा Stasi आधिकारिक बर्लिन पर्खाल को गिरावट पछि उठाएर हुनेछ हुनत, हामी कडा आफूलाई यो मामला छ र युरोपेली गोप्य सेवाहरू (जस्तै नेदरल्यान्ड मा AIVD रूपमा) बस Stasi को विधिहरू अपनाए छैन कि कि सोध्न र परिष्कृत। मैले मुख्यतः यो ट्रयालका विशाल मात्राबाट सोचे जुन सोशल मिडियामा सञ्चालन हुने देखिन्छ, जस्तै मैले हालै गरे यो उदाहरण फेसबुकमा देखाइएको छ, तर यो पनि वर्णन गरिएको छ यो लेख जहाँ मैले आफुलाई के सोच्नु भएको हो मैले व्यक्तिगत रूपमा जब मैले सोचेँ कि म अस्थायी रूपमा लेख्छु।
पूर्वी जर्मनीमा GDR को स्थापना पछि, स्टेसी 8 फेब्रुअरी 1950 मा पूर्ण भयो महासंघ फेर्व Staatssicherheit, एसडीईको भागको रूपमा, GDR को सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल। स्टेसीको आधिकारिक लक्ष्य मानवताको रक्षा, समाजवादी राज्यको निरीक्षणका आधारमा मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको स्वतन्त्रता थियो। सेवाले प्रायः आफ्नै आबादीमा गाँसिएको छ, जसले यसलाई राजनीतिक रूपमा सही तरिकाले व्यवहार गरेको कुरामा आँखा राख्यो। यो जनसंख्याबाट विद्रोही वा विरोध रोक्न हो। 1957 एरिच Mielke राज्य सुरक्षा को बन्नुभयो, र त्यो स्टेसी प्रमुख संग। आफ्नो नेतृत्वको अधीन, गोपनीय सेवा प्रभावकारी संगठन बन्यो जसको लागि यो आज थाहा छ। स्टेस्सी पूर्वी जर्मनीमा समाजका सबै फन्टहरूमा घुसपिट भयो। यस प्रयोजनका लागि नागरिकहरूको एक प्रमुख मात्रामा प्रयोग गरिएको थियो, जसको एक जीडीआर को 50 निवासीमा थियो। Inoffizielle Mitarbeiter स्टेसी बाट।
र के तपाई साँच्चै सोच्नु हुन्छ कि वर्षहरु मा पूर्व र पश्चिम जर्मनी को विलय संग '90 अचानक गायब भयो? हामी सोच्न सक्छौं कि पश्चिमी लोकतान्त्रिकहरूले त्यस्तो काम गर्दैनन्, तर त्यो विचारले ओवरहालको लायक छैन? र के हो यदि AIVD को पेरोल मा धेरै मान्छे हो, उदाहरण को लागि, जो यो कभी को अनुमति नहीं देगा? एक लोकतान्त्रिक चलाउने सही तरिका हो, जहाँ जनसंख्याको 90% ले यो लोकतान्त्रिक जीवनमा रहन सक्छ र 10% मा डेभलपमेन्टको झ्यालखाना बनाए राख्न मद्दतको लागि मासिक सानो अतिरिक्त बोनस प्राप्त गर्दछ? के त्यो असामान्य साजिश विचार हो? अब यदि हामी केवल हेर्न सक्दछौं shills त्यहाँ वैकल्पिक मिडिया मा वरिपरि चलाउन जस्तो, र म सुरु समय लेखन देखि मेरो आफ्नै अनुभव नजर मा एक्लै यदि र कति मान्छे "गल्ति" मेरो बाटो एक पछि चरण पटक fanatically विरुद्ध काम गर्न सुरु मलाई आए मा, त्यसपछि मैले अधिक र अधिक आश्चर्य गर्न सुरु गरौं भने हामीले शब्द 'यथार्थ' शब्दको साथ मात्र 'यथार्थवाद' शब्दको रूपमा बदल्न हुँदैन।
मेरो लेख रोनाल्ड बर्नार्ड (स्वयं आत्म-घोषित पूर्व बैंकर) को बारे मा, यो तेजी देखि स्पष्ट छ कि सोशल मीडिया र वैकल्पिक मीडिया सैकड़ों मा, हजारहरु पनि, यस प्रतीत देखि धेरै स्पष्ट को रक्षा मा सक्रिय छ शान्त। यो अंग्रेजी शब्दको लागि प्राध्यापकको रूपमा उभिएको छ, तर वास्तवमा एक बनाइएको कथा बनाउँछ। यद्यपि उनीहरूको कथाहरूको 'सत्य नहुने' को लागि कुनै सशस्त्र प्रमाण प्रदान गर्न सकिँदैन, उनीहरूको विवरणहरू समाप्त हुन लागेका छन् बैंकिंग प्रणालीको शीर्ष परतहरूमा एक उपान्य अनुष्ठान बाल बलिदानमा लगभग सहभागिता र अधिक पहिलो लाइनबाट सुनेका अङ्ग्रेजीहरू बच्चाहरू बाहिर पसे, बरु उच्च 'सच हुनु राम्रो' सामग्री। मान्छे को सीवी को बारे मा केहि थाहा छैन र समयरेखा उनको कहानियों मा पुरा तरिकाले सही प्रतीत छैन। उहाँले आफ्नो कथा बनाउँछ मुख्यतः पहिले देखि नै ज्ञात "साजिश सिद्धान्त" र स्पष्ट रूप देखि एक स्पष्ट कथा कहानी ("जस्तै" नकली समाचार "जोडने को लक्ष्य प्रतीत हुन्छ यहाँ वर्णन गरियो)। उसले कुराहरू उत्पन्न हुन सक्छ भन्छन्, तर आफ्नो कथा को पदोन्नति कहिलेकाहीं मिश्रण 90% सत्य UFOs, फ्लैट धरती सिद्धान्त, सुन्तला द्वारा अनुष्ठान infanticide, एक जस्तै कुराहरू धेरै वैकल्पिक मिडिया साइटहरु मार्फत ठाउँ लिन्छ कि होइन नयाँ गुरु जो भन्छन् 500 हजार वर्ष भविष्यबाट आउनुहोस्, र त्यसमा।
सोशल मिडियामा हामी यस्ता साइटहरूको हजारौं अनुयायीहरू र यी हजारौं अनुयायीहरूले अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा द्वन्द्विक सम्बन्ध देखा पर्दछ। के हुन सक्छ कि हामी मान्छे को एक सञ्जाल संग काम गर्दै छन् जो स्टेसी को उत्तराधिकारी को पेरोल मा हो? Inoffizielle Mitarbeiter। आइपुगेको छ: यदि मानिसहरूले गोप्य भूमिका खेल्छन् भने उनीहरूले तपाईंलाई मलाई वा मलाई दिन सक्नुहुन्न।
वैकल्पिक मीडिया बाट धेरै प्रसिद्ध ज्ञात नामहरु बाट मैले मेरो लेखहरु पछि रोनाल्ड बर्नार्ड को बारे मा एक त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त गरे। म जोहान ओल्डेनकम्प, कोन वर्मेरेन, जेनाके मुन्सौउवर, र अन्य प्रसिद्ध नाम बारे कुरा गर्दैछु। म तपाईंलाई तल मेरो प्रतिक्रिया देखाउनेछु र तपाईंलाई यो सावधानी पढ्न र यसलाई पूर्णतया विचार दिन चाहन्छु। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंको सोशल मिडियामा वा तपाईंको "वास्तविक जीवन" मा 10% वा धेरै प्रतिशतको प्रतिशत हो जसले वास्तवमा यस्तो गल्तीको भूमिका प्रदर्शन गर्दछ, मान्छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई कहिल्यै यो र सधैं दिन सक्दैनन्। तिनीहरूको "प्रामाणिकता" का रक्षा गर्न जारी रहनेछ। तपाइँहरूलाई सुझाव दिएको छ कि मैले केही उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूलाई समानसँग भेटेको कुरालाई व्याख्या गर्नुहोस्:
म निम्नसँग छु।
के तपाईं आफ्नो आत्मा बेचेका मानिसहरूलाई संलग्न गर्न र उनीहरूको भ्रामक कार्य को बारे मा थाहा छ यो संलग्न उपयोगी व्यायाम हो? सबै पछि, त्यहाँ धेरै संलग्न छ र यो कार्डहरूको सम्पूर्ण घर ध्वस्त हुनेछ।
त्यसो भए कि AIVD को एक एजेन्टले उनको अन्तस्करणलाई हटाउन चाहानुहुन्छ; के त्यहाँ स्थिरता अनुबंध छैन कि उसलाई जारी राख्न वा बलियो हुनेछ? मलाई कारावास र त्यो किसिमको उपायहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ? वा के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एक क्लबसँग गोपनीय सम्झौताबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ (उल्लङ्घनका लागि सानो ठीकसँग)? मान्नुहोस् यी एजेन्टहरू मानिसहरू हुन् जसले समाजमा भर्ती भएका छन् र यी मानिसहरू एक सामान्य कार्यमा वा विश्वविद्यालयमा वा राम्रो स्थानमा छन् कि जस्तै; के उनीहरूले उनीहरूको सम्पूर्ण क्यारियरलाई लुगा लगाउँदा भने उनीहरूले गोप्य सेवाका एजेन्टहरू पनि गरेनन्?
मलाई लाग्छ कि तपाईं सम्मोहक रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ कि AIVD को एजेन्सीले उसलाई 'एजेंट' को रूपमा काम गर्न अनुमति दिन सक्दैन।
म एउटा उदाहरण उल्लेख गर्दछु। मानौं कि चरम मामला मा जर्ज बुश जूनियर 911 र 'आतंक विरुद्ध युद्ध' को बारे मा सम्पूर्ण जनजातिहरु को बेडरूम को खेद छ। त्यसोभए उहाँले आफ्नो अन्तस्करणमा गम्भीरता पाउनुहुनेछ। के तपाइँ कहिल्यै सम्भव हुन सक्छ भन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? उनले दुई शब्द बोल्न सक्नुभन्दा पहिले उनी आफ्नो जीवनको लागि तिर्न पर्छ।
एआईवीडीका लागि गोपनीय रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यो कामले के गर्न सक्छ र एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ वा सम्भवतः योग्य हुन सक्छ? त्यो आवश्यक नहुन सक्छ बच्चा प्रयोग कालो बजार (एक ला 'को जैक Abramoff विधि), तर सबै को कालो बजार थप वा कम उदाहरणका लागि गुमेको लुकेको छ, मुख्यधारा सामाजिक समारोह मा एक क्यारियर बनाए। त्यसो गर्दा गोप्य सेवाको एजेन्टको रूपमा काम पनि मुख्य कार्यबाट हटाउनेछ। त्योसँग केहि परिणामहरू छन्। कसैले घर गुमाउन सक्छ र सुन्न सक्छ।
त्यसैले मैले यो सिद्धान्त सुरु गर्दैछु कि गोप्य सेवाको एजेन्सीको लागि उनीहरूको अन्तस्करण सुन्नु र बाहिरको कदम असम्भव छ। म सुझाव दिन्छु कि यो एक नियमितता हुन सक्छ।
यसैले म भन्न चाहन्छु कि शायद IIVD को लागि काम गर्ने मान्छे को लागी केवल 1 विकल्प हो र जो आफ्नो अन्तस्करण मा संबोधित गर्दै छन्। उनीहरूले मद्दत गर्न सक्दैनन् र जारी राख्छन् र उनीहरूको विश्वसनीयताको रक्षा गर्न प्रयास गर्छन्।
म प्रसंगवश प्रेम एक निश्चित bloodline वंश (मानिसहरूलाई goyim र साथ trickery र छल सामान्यीकृत छ छलफल जो) संग एक क्षण अवहेलना 'मान्छे को एम Ultra'-जस्तो इतिहासहरू वा उदाहरणका लागि।
त्यसैले कल्पना (सम्मोहक बोल्ने) तपाईंले आफ्नो आत्मालाई AIVD मा बेच्नुभयो र वैकल्पिक मेडियामा आफैलाई 'सीधा ब्लावर' प्रस्तुत गर्नुभयो। र तपाईं गर्मी बुलेट रूपमा सेवा यसलाई vliegtuig..of को गर्मी-खोजिरहेका मिसाइल मोड्नु थियो कि ठान्नु: को "लगभग साँचो" र यसरी मा तपाईं मान्छे ठान्नु कालो प्लेट मा सेतो केंद्रित (हेर्नुहोस् यो लेख) प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसैले लुकेको सत्य मास्क गर्दछ; के तपाईं कहिल्यै दिन सक्नुहुनेछ?
निस्सन्देह तपाईले यो प्रश्न 'yes' सँग जवाफ दिनुहुनेछ, तर अजनबी सम्झौता वा चैंपनीयताको नियमितताले कुनै जवाफलाई अविश्वसनीय बनाउँछ। म मान्न सक्दिनँ गर्न सक्छ देऊ।
त्यसैले म आफै र पाठक को लागी के बावजूद को खोज को लागी अरु केहि छैन।
वैकल्पिक मीडियामा AIVD एजेन्सीहरू, मेरो विचारमा, गोठालोको रङको लक्ष्य हुनुपर्छ। यद्यपि प्राय: मेरो विचारमा "ग्रेका 50 छायाहरू" हो।
के तपाईले 10 सेकेन्ड भन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरी कालो र सेतो छविमा राख्नुभयो? के तपाईंले लुकेको छवि देख्नुभयो? त्यो गर्नुहोस्। तपाईं एक धेरै स्पष्ट चित्र देख्नुहुन्छ।
मेरो लक्ष्य इन्टरनेटर वा लुकेको तस्बिरलाई ब्ल्याक र सेतोमा (क्रमशः: मिडिया / alt.media) देखाउनका लागि मानिसहरू।
मैले तपाइँको इमेलको उत्तरको जवाफको लागी कानूनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सक्दिन। स्थापनाको एक एजेन्टले कहिल्यै उनको अन्तस्करण बोल्न सक्दैन र यसैले सधैं सधैं जान्छ र उहाँको शरीर र उनको ले आफूलाई रक्षा गर्नुपर्छ। वा, साँच्चै, रोनाल्ड बर्नार्ड जस्तै तपाईं मृत्युको कगारमा रहनु भएको छ र 'लगभग मृत अनुभव' अनुभव गर्दछ र चमत्कारिक रुपमा फर्केर आउनु हुन्छ र फेरि तपाईंको सम्पूर्ण संसार फेरि आउनेछ। यद्यपि, मूर्तिहरूमा विश्वास गर्दैन।
मानौं कि तपाईं एक AIVD एजेन्सी हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं आफ्नो विवेकबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईं एकदम खराब विभाजनमा हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई बताउन सक्छु कि मेरो ड्राइभ लेख्न कहिल्यै आर्थिक लाभ थिएन। मैले यसलाई सुरू गरे किनभने म मीडियामा बसिरहेको थिएँ। त्यो मलाई लगभग सबै खर्च। यद्यपि, म 1 कुरा भन्न सक्छु: मसँग स्पष्ट अन्तस्करण छ।
तपाईं शुद्ध छन् र वास्तविक Showdown गर्न चाहन्थे विकल्प पनि छ, तर तपाईं ती सम्पर्क गरेका (स्पष्ट मेरो विचारमा) मार्फत ल्याए किन बाहिर नियन्त्रण वैकल्पिक मिडिया आफ्नो कहानी र त्यसैले म सोधेर छु मिका काटको जोखिमले देखेको छ कि तिनीहरू सबै उनको पछि आए। तपाईंले मलाई किन सम्पर्क गर्नुभएन? तपाईं केहि अनुसन्धान संग यो भेद गर्न सक्षम भएको हुनुपर्छ।
तपाईं मेरो विचारमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुहुन्छ कि सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया, थरिरी Baudet र यसको फोरम डेमोक्रेसी समेत, सम्पूर्ण राजनीति, मुख्यधारा मीडिया, सोशल उपकरणको ठूलो भाग, पुलिस, न्याय, तर पनि मानिसहरू शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूमा, आफ्नो बैंक खातामा थप बोनस प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं सम्भवतः कलाकारहरू, लेखकहरू, संगीतकारहरू, कलाकारहरू, विशेषज्ञहरू, वकीलहरू, पत्रकारहरू, र धेरै अन्य व्यावसायिक समूहहरूको विचार पनि गर्न सक्छन् जसले मानिसहरूको धारणालाई प्रभाव पार्छ र निगरानी गर्दछ। Inoffizielle Mitarbeiter। ध्यान राख्नुहोस् कि यी मानिसहरू कहिल्यै यो स्वीकार गर्दैनन् र कहिल्यै साँच्चै प्रदर्शन गर्न हिम्मत नदिने, हिम्मत र राज्यको वास्तविक, कठोर, अनमोचक आलोचना दिन चाहन्छन्। ध्यान राख्नुहोस् कि त्यो 10% पानी माथि वा प्रमाणको बोझको साथ आउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईंले 10% एक अतिमूल्य अनुमान फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तर यो सोच्न के हो कि यो सम्भव हुन सक्छ!
यदि यो परिकल्पना सही छ भने, त्यहाँ त्यहाँ केवल 1 विकल्प छ र यो वास्तविक सीटब्ल्लावरहरूको लागि पर्खिरहेको छ। तर (धेरै सम्भावनाहरू) गम्भीर असंगत ठेकेहरू र सम्बन्धित पूर्वाधार खतरा दिएका छन्, सम्भावना अपेक्षाकृत सानो छ। यदि सम्मोदन सही छ भने, यो 90% माथि छ (चल्ने सानो 10% अनमास्क गर्नका लागि अनुमति दिनुहोस् कि प्रतिशत उच्च छ)। र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो सोशल मिडियामा धेरै गरम छलफलको परिणाम हुनेछ; त्यो सक्रिय 10% बाट ठीक। तिनीहरू यस छविलाई तपाईंको टाउको बाट चाँडै कुरा गर्न र यसलाई 'हास्यास्पद पारदर्शी बकवास' को रूपमा खारेज गर्न प्रयास गर्नेछ। वा तिनीहरू यसो भन्छन्: "हो, त्यो ठीक हुनेछ, तर म वास्तवमा होइन Inoffizielle Mitarbeiter "। नेदरल्याण्ड्समा वैकल्पिक मिडियाको सम्भावना नजिक छ। त्यो स्टेसी 2.0 को अनमास्किङ को शुरुवात हुन सक्छ?
भाषण र सोचको भाषण, एक वर्ष भित्र जान सकिन्छ
ट्याग: aivd, वैकल्पिक मिडिया, डीडीआर, विशेष, पूर्वी जर्मनी, रोनाल्ड बर्नार्ड, shills, जासूस, स्थिर, trolling
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 01: 19
के तपाईको सामाजिक वातावरणमा मानिसहरू प्रतिक्रिया दिन वा लेख साझेदारी गर्न धेरै सक्रिय छन्? त्यहाँ रहेका मानिसहरू जस्तै रोनाल्ड बर्नार्डले व्यापक रूपमा समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, जस्तै लेख र साझा गर्ने हो? उनीहरूको प्रश्न सोध्नुहोस् यदि तिनीहरूले हुन सक्छन् Inoffizielle Mitarbeiter AIVD को? उनीहरूको प्रोफाईललाई हेर्नुहोस् कि तपाईसँग वास्तविक व्यक्ति वा नक्कली प्रोफाइलको साथ हो। उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि तिनीहरूले आफ्नो आय निर्दिष्ट गर्न सक्छन् ("तिमी सबै के गर्दैछौ?")। तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् किन तिनीहरू यति चालक छन्? तिनीहरूले सजिलो रन लक्ष्य षड्यंत्र को सिद्धान्त वा मीठो-देख आध्यात्मिकता (Vaccinations, chemtrails, 911 काम भित्र, UFOs, आदि) आफूलाई विचार किन, तर लेख्छन् गर्ने मार्टिन Vrijland को unmasking लेख समर्थन प्रदान छैन तिनीहरूलाई सोध्न? तिनीहरूलाई यो प्रतिक्रिया कसरी हेर्नुहोस् भनेर यो लेख पठाउनुहोस्। यो समय हामी जनतालाई बेवास्ता गर्न चाहन्छौं ताकि हामी संगठनलाई बेवास्ता गर्न सक्छौं। किनभने कुनै फिर्तीको बिन्दु तपाईं भन्दा सोच्न भन्दा छिटो पुग्न सक्दछ।
"के एक असमानता नगरी" जस्तै टिप्पणीहरूको साथ खारेज नगर्नुहोस्।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 01: 34
यस लेखको मेरो फेसबुक पोस्टमा पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएको ट्रेलको राम्रो उदाहरण तल देखाईएको छ। यो केवल दर्जनौं उदाहरणहरूको 1 हो जुन मेरो फेसबुक पेजमा दैनिक पास हुन्छ (जुन मैले सामान्य रूपमा हटाउन र ब्लक गर्छु, तर यो उदाहरणको लागि यो थोडा समयको लागि खडा हुन सक्छ)।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 02: 02
Trolls लाई लिंक गरेर, उदाहरणका लागि मार्टिन व्रिजल्याण्ड, तपाईं आफ्नो लेख अविश्वसनीय बनाउन सक्नुहुन्छ। यी टोलहरूलाई छलफल समूहहरूमा लेख साझेदारी गर्न र यो मार्टिन व्रिजल्याण्डको लागि रेकर्ड गर्न अनुमति दिईएको छ, तपाईं अप्रत्यक्ष रूपमा "बेवकूफ" मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ लागू गरिएका विभिन्न तरिकाहरू छन्। यो 1 हो।
विलीको प्रोफाइल धेरै सम्भवतः नक्कली छ (यहाँ हेर्नुहोस्):
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 02: 10
अर्को तरिका हो कि ट्रोल लागू हुन्छ पाठको साथ बोल्ड गर्न र प्रतिक्रिया गर्न को लागि पाठकलाई थाहा छ कि तपाईंलाई "पागल" हुनु पर्छ।
साथै, विषयहरू अन्य विषयहरूमा सारिएका छन् वा छलफलहरू अन्य साइटहरू वा पृष्ठहरूमा निस्केका छन्
सबै भन्दा राम्रो ज्ञात विधि निश्चित छ अनलाइन आक्रमण र अनलाइन ब्ल्याकिंग पूर्ण, जस्तै मेरो सुरुवात देखि भयो।
यसैले सबैभन्दा परिमार्जित ट्रल्सहरू जसले सहभागी हुन चाहन्छन्। त्यसैले तपाईं बेवकूफों, इडिटिक्स विचारहरु संग जुड्न सकिन्छ र लामो समय सम्म यो पनि प्रयोग गर्न को लागी गर्न सकिन्छ "हेर्न को लागी कि पागल मार्टिन Vrijland समर्थक केहि पागल गरे छ"।
Giel Beelen त्यो एक पल्ट जब उनले मलाई अभिनेता जो बन्दूक संग एनओएस स्टूडियो मा आक्रमण गर्न को लागि लिंक गर्ने प्रयास गरे। म कुराकानीमा रेकर्ड थियो र उहाँले कटौती र टाँस्न थियो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ किनभने Giel पर्दाफास थाह (उहाँले म हावा मा प्रत्यक्ष थियो कि मलाई भन्नुभयो रूपमा ... उहाँले एक घण्टा पछि पठाइयो)
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 19
एक पागल संयोग, अब मैले यो लेख पढेको छु कि मैले कल्याण मेडिकल संसारमा एक महिला भेटें र जो अब नीदरल्याण्डमा 17 वर्षको जीवन बिताउँछ।
उनी सधैँ पूर्वी जर्मनीमा बसिरहेका थिए र ती चित्रहरू बारे सबैलाई थाहा थियो जुन सबैले एरिच होन्करकरबाट भत्काइदिए। पर्खालको पतन पछि तिनी यहाँ बस्न आए।
तर तिनीहरूले शाब्दिक भने त्यो थियो गरेका थिए तर आफ्नो गाउँ को reorganization र तिनीहरूले मानिन्छ भन्न जहाँ जस्तो आरोप सामना बारे केहि गरे कहिल्यै "यो पूर्व जर्मनी थियो रूपमा हल्याण्ड मा धूर्त छ जस्तो देखिन्छ", तर त्यो भने मान्छे सधैं ईमानदार छैनन् र अखबारहरू समाचारहरू विच्छेद गर्छन् तर तिनी भन्छिन्: "दुई छोराछोरीसँग तपाईंले यो भन्दा राम्रो बनाउन पाउनु भएको छ" अर्को शब्दमा, हामी केवल एक बाटो हो (शतरंज अभिव्यक्ति)
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 11: 25
हामी निश्चित रूपमा न त बाटो होइनौं र चेकमेट। त्यो मनोवृत्ति क्षमता उत्तीर्ण गर्दछ। हामी ठूलो संख्या संग छौं र यदि सबैले आफैं सक्रिय गर्दछ भने परिवर्तन वास्तवमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भय र सशक्तता सबै भन्दा खराब चीज हो जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ।
तथापि, उनी भन्छिन् कि यो जीडीआर भन्दा राम्ररी देखिन्छ जस्तो एक सकारात्मक आवाज हो।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 11: 37
केही नियन्त्रित विपक्षीहरूले खेल राम्रो ढंगले खेल खेल्छन्।
त्यहाँ वैकल्पिक मिडिया देखि वर्ण 'लगान जागरूकता' रेडियो किसिमका निम्तो र तिनीहरूको कथा बताउन गरौं जो एक चाल छ, तर तपाईं स्पष्ट भन्दा आफ्नो साइट तपाईं के धेरै पाहुनाहरूलाई बाहिर ल्याउन पछि छैन आवश्यक भन्ने मा बनाउन ।
र तपाइँ अतिथिको साथ छलफलमा संलग्न हुनुहुन्न। तपाईं सधैँ तटस्थ रहनु हुन्छ।
सधैँ यस्ता आलोचकहरूलाई ध्यान दिनुहोस्।
म bestaan'en 'म conjure गर्न सक्नुहुन्छ' Oldekamp shills लागि (रेडियो साक्षात्कार को घोषणा पछि) नियमित चेतावनी दिए पनि यो यति हुनेछ किन (जस्तै। अल्फ्रेड -don'tmention डा Judy काठ Labremont वेबर, जेम्स बताए Johan'kabouters - don'tmention Dr Judy Wood-Corbett)
कहिलेकाहीं म उहाँलाई (म मेरो मामला को 100% पक्का थियो र substantiate सक्छ विशेष गरी रूपमा) पहिले चेतावनी दिए तापनि त्यो प्रसारण एक वास्तवमा म उसलाई देखाए के महत्वपूर्ण प्रश्न थियो कि समय सुझाव।
लगभग हरेक अतिथि जसले पिटरोरियाको प्रसारणमा रहेको थियो। अपवादका बाहेक, यी घटनाहरूमा उहाँले सही प्रश्नहरू (जस्तै एन्ड्रयू जॉनसन चेकवेभेंसीको अवस्थामा) सोध्नु भएन।
त्यसैले महत्त्वपूर्ण नियन्त्रित विपक्षी एजेन्टहरूको सूची कति ठूलो छ भन्ने तस्वीर सिर्जना गर्न, सबैले प्रसारणमा भएको छ कि हेर्छन्, र त्यसपछि थोप्लाहरू जोड्नुहोस्।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 16: 15
डुब, सबै सम्मान संग, तर एफबी मा Karin Karin को एक ग्लाइडर के हो।
उनको कुरालाई हेरौं। मलाई थाहा छैन कि त्यो स्क्यानर हो या केवल भ्रमित छ।
उनी आफैले नै मानसिक वा क्लियरव्यान्टेंटको लागि बाहिर निकाल्छिन् (जुन मसँग पुरातया मलाई अझै स्पष्ट छैन, सम्भवतः दुवै)
तर तिनी बिरालो र कुत्तहरू हराउँछन्।
केहि सही छैन, म वास्तविक क्लियर भिजन हाहाको रूपमा भन्छु।
केवल तपाईंको क्रिस्टल बलमा एफएफ हेर्नुहोस् म टिका म्यागिरी भन्छु।
वास्तवमा, सबै क्लियरवुडेंटहरू, र 911 पछि व्यक्ति द्वारा विशाल पछि।
उनीहरूले थाहा पाएनन् यो पछि र पछि तिनीहरूले पनि थाहा थिएन के भयो भने।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 17: 11
म पनि अझै साझेदारी कि फेसबुकमा मुख्य रूप मेरो लेख को सबै भन्दा भन्न र encapsulated समस्या रूपमा बाँच्न गर्न shills र समस्या 'मार्टिन Vrijland' संग लिंक स्थापना गर्न shills एक गुच्छा पढ्न druf। यो आवाज को तल छ ... यदि तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईं यसलाई हेक गर्न सक्नुहुन्छ। पूछताछबाट यसले देखा पर्दछ कि कुनै पनि "सामान्य पाठकहरू" जसमा फेसबुक टाइमलाइनमा मेरो सन्देशहरू समाचार फिडमा देखिन्छन्। मानिसहरू साँच्चै मेरो पृष्ठमा विशेष हुनुपर्दछ। पछि, तथापि, लगभग कुनै पनि गर्दैन। व्यक्तिहरू प्राय: फेसबुक खोल्ने बित्तिकै केहि देख्नै पर्छ। अन्यथा तिनीहरूले तपाईंलाई बिर्सनेछन्।
किनकि शिलहरूले अझै पनि मेरो कथाहरू पढाउँछन् र साझेदारी गर्दछ (त्यहाँ छुटेका अपवादहरू), त्यस्ता तथ्याङ्कहरूसँग लिङ्क पनि मेरो विश्वसनीयता कमजोर गर्न अस्पष्ट छ। यी शिलहरूले पनि फेसबुकमा छलफलमा मेरो लागि यो अवशोषित गर्दछ। यसले अविश्वसनीय नयाँ पाठकलाई धारणा दिन्छ कि उनी केवल मार्क्स भर्जल्याण्डको समर्थन गर्ने मात्र खराब व्यक्ति हुन्।
एनबी यो पनि एक अनुसन्धान तथ्य हो कि यदि एक लेख साझा गरिएको छ, फेसबुकले कसैको साथीहरूलाई देखाइएको छ कि छैन वा निर्धारण गर्दछ।
त्यसोभए, फेसबुक वास्तवमा बिस्तारै नियन्त्रणमा राखिएको छ कि यो उपयोगी क्यारियर कबूतरबाट नकारात्मक माध्यममा परिवर्तन भएको छ जुन तपाईंको अनुहार र रंगले तपाइँले एन्कोप्सन कैंसरको जस्तै व्यवहार गर्दछ।
लगभग 17 हजार फेसबुक मनपराउन प्रभावकारी रूपमा लगभग शून्य छोडिएको छ।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 17: 21
त्यसोभए यदि तपाई समस्याको अनुच्छेद गर्नुहुन्छ भने, तपाईलाई यसलाई हटाउन आवश्यक छैन। त्यो काटेर अनावश्यक हुनेछ, किनकि यदि तपाईलाई कसैलाई शहीद बनाउनुहुन्छ, मानिसहरूले वास्तवमा उनीहरूको पदहरू पढ्नेछन्।
त्यसैले समाप्त हुनाले अवांछित विकल्प हो। Encapsulation राम्रो काम गर्दछ।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 17: 23
रक्त आपूर्तिको अन्वेषण र कटौती (अनलाइन भ्रामक र मानहानि प्रदान गरेर) ताकि कसैले कसैलाई कालो हो कि उसले पैसा कमाउन सक्दैन। त्यसोभए यो स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ ... यो सोच्न के जस्तो लाग्छ
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 17: 26
र भेन्डी Gerritsen परिचित रणनीति संग अर्को विषय (aforementioned गर्मी बुलेट) लाई निषेध गर्न आउछ।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 19: 53
तपाईंको एफबीमा 1 सेप्टेम्बरको लेख अन्तर्गत, रोनाल्ड ब्लिजिङ्कले 'प्लाथफड' नाम मा मार्टिन वान डिजक नामको जवाफ दिए।
उनले "हप्ताको प्रश्न" नामक एक कार्यक्रमको भिडियो पनि राखे
सोफी हिल्डब्रान्ड संग। हप्ताको प्रश्न थियो: "सहि पृथ्वी भनेको वास्तविक सत्य छ?"
अतीतमा, हेल्लब्रान्डलाई पहिले नै स्पेसलाइटमा 'वैकल्पिक मिडिया राख्ने' प्रयोग गरिएको छ, जहाँ एक जेरोन साजिश खेलाडी। मैले आफ्नो अन्तिम नाम गुमाएको छु तर मलाई थाहा छ कि त्यो त्यही खोखोला पृथ्वी / स्टर्जेट / क्रिस्टल बलमा / शून्य ऊर्जा / शमन अनुदान क्लबको रूपमा एन्टोन टिबेनको रूपमा छ। यो जेरोन र एन्टोन टिबेन को मामला मा म संधै सोचा कि उनि सिर्फ आफ्नो रास्ता गुमाए, तर अब मेरो आरक्षण छ।
सोही, Oldekamp Teuben छ (पछि विभिन्न भ्रष्टाचार Teuben) कहिल्यै Oldekamp मानिन्छ बिभाजनमा बाला थियो कसरी थाहा चाहन्थे किनभने आफ्नो प्रसारण एक समय थियो।
निस्सन्देह तिनीहरूले गर्म बुटको वरपर घुमाइरहेकी थिइन् किनभने हेले फेरि सही प्रश्न सोध्न सकेन र लारीलोकलाई सोध्न र स्वीकार गरेनन्।
एरेन्ड जेन्ड मेरो मतलब बर्नार्ड, टिबुन, जेरोन र ओल्डेनक्याम्प को प्रदर्शन।
वा तपाईं WO2 को समयमा स्विट्जरल्याण्डको रूपमा तटस्थको रूपमा रहन हुनुहुन्छ? ????
खाली ब्रेन लेखे:
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 22: 02
म निश्चित रूप देखि यो एक समानार्थी साजिश विचार को लागी नहीं मानन को लागि केहि निश्चित व्यक्ति AIVD को पेरोल मा हो। पहिले पनि सोच्नुहोस् कि आवश्यक छैन एक अजीब अनुबंध हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ वा मानिसहरूलाई चुप राख्न को लागि विशाल बोनस भुक्तानी गर्न को लागी छ।
किनभने किन यो धेरै व्यक्ति "काँही" ठाउँ जस्तो होइन? र विशेषतया जब यो 'राष्ट्रिय रुचि' को लागी आउँछ? मानिसहरू चाँडै 'देशको लागि केहि गर्न' को लागी 'सम्मानित' महसुस गर्छन्। र यो केवल आवश्यक छ यदि तपाईं जादुई शब्द 'सुरक्षा' छोड्नुहोस्। यसको साथ तपाईं आफ्नो लागि धेरै मान्छे जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई डच राष्ट्रिय टोलीका लागि केही नि: शुल्क टिकटहरू स्प्यान गर्न सक्नुहुन्छ वा उनीहरूलाई राम्रो यात्राको प्रस्ताव गर्नुहोस्। किनभने यो 'राम्रो कुरा' को लागि हो? हामी सबै एक 'सुरक्षित देश' मा बस्न चाहन्छौं? तपाईं शर्त छ कि धेरै मानिसहरू यो संवेदनशील छन्।
तर के हामी सबै एक भ्रामक तरिकामा संलग्न छैनौं? अनियमित आवासीय क्षेत्रमा हिंड्नुहोस् र तपाईले 'क्याट्सपस ट्रयाक रोकथाम' को साथ संकेत देख्नुहुनेछ। सबै धेरै निर्दोष देखिन्छ, तर यो अन्ततः हस्तक्षेप, नियन्त्रण र क्लिक हुन्छ।
तपाईं पनि हेर्नुहुन्छ कि हरेक डच शहर 'टीम प्रवर्तन' मा वृद्धि मा छ। 'साधारण नागरिक' जसले आफ्नो 'सुरक्षा' योगदान गर्छ। अन्ततः, बस एक्स्टेन्सनको पुलिस।
जहाँसम्म ट्राल चिन्तित छन्; तिनीहरू स्मार्ट छैनन्, किनभने तिनीहरूले त्यस्तो पारदर्शी काम गर्छन्। फेसबुक एक हर्ननेटको घोंसला भएको छ। ती सबै टोलहरू / शिलहरू वास्तवमा मात्र पुष्टि गर्दछ कि तपाईं आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुहुन्छ।
5 सेप्टेम्बर 2017 मा 23: 00
एक पटक, र त्यस टिप्पणीमा आउनु हुन्छ यदि तपाईं त्यो चिन्ता हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग लुकेको वा कहिलेकाहीं केही पनि छैन, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ, शुद्ध एस ... डिस्पोजेजमा अभ्यासहरू
6 सेप्टेम्बर 2017 मा 03: 41
'प्रवर्तन' idd। त्यो शब्द एक्लै कष्टप्रद हुन्छ। प्रवर्तन WHAT? प्रवर्तन हरेक चीज!
ती हारेकाहरू जसले सधैं पुलिस जान चाहन्थे तर सफल भएन र उनीहरूको गीता सपना पूरा भयो। उनीहरूको कल्पना जस्तै धेरै देखिन्छ। घरमा मिरर अगाडि उभिए हेर्नुहोस्।
6 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 03
तपाईको लेख जारी राख्नुहोस्।
तपाईंको सन्देशमा ध्यान राख्नुहोस्।
6 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 26
वास्तवमा, तर म पाठकहरूलाई कसरी खेलिएको छ भनेर देखाउन चाहन्छु र यसैले म पनि आक्रमणहरू देखाउँछु, म ट्रायल गर्ने तरिकाहरूको व्याख्या गर्छु र म शिलहरूको नाम भन्छु।
6 सेप्टेम्बर 2017 मा 10: 28
[उद्धरण] "कसैलाई भ्रमित छ किनभने कसैले कसैलाई आफ्नो बच्चा हटाउन खोज्छ वा उसले सम्पर्क अस्वीकार गर्यो किनभने उनी भ्रमित हुन्छन्।"
ठीक छ, तपाईं आफैलाई कसरी बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं मृत्युसँग धम्की दिनुहुन्छ भने, तपाईं एस्तरको घोषणा फाइल गर्नुहुनेछ र तपाईं बेन्चमा मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई परेशान गर्नुहुन्न।
« भाषण र सोचको भाषण, एक वर्ष भित्र जान सकिन्छ
एलोन मुस्क "एआई विश्व युद्ध3शुरू हुनेछ, उत्तर कोरिया नहीं" »
कुल भ्रमण: 2.545.686
मार्टिन भिजल्याण्ड op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?
SalmonInClick op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?
लिडिया रुस्जे op मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने?
क्यामेरा2op परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ